လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၁ မေ ၂ရ အာရ်အက်ဖ်အေအသံလွှင့်အစီအစဉ်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ သတင်းထောက် နီလာစိန် ၏မေးခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၁ မေ ၂ရ အာရ်အက်ဖ်အေအသံလွှင့်အစီအစဉ်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ သတင်းထောက် နီလာစိန် ၏မေးခွန်း
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၁ မေ ၂ရ အာရ်အက်ဖ်အေအသံလွှင့်အစီအစဉ်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ သတင်းထောက် နီလာစိန် ၏မေးခွန်း
Posted by mandalay1875 on May 30, 2011 in Copy/Paste |4comments
ဟဲလို … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ကျမ နီလာစိန်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လောစ့်အိန်းဂျလိစ်မြို့ အခြေစိုက် ရတနာပုံနေပြည်တော် သတင်းစာကသတင်းထောက်ပါရှင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ ကျမ မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အမည်ကို လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်ကစပြီး Union of Burma ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာနဲ ့ကုလသမဂ္ဂမှာ အဂ်လိပ်လို ခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက Myanmar ဆိုပြီး နာမည်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ ့အထိ Burma ဆိုပြီးခေါ်ဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း သာမန်လူတွေရောရုံးဌာနတွေမှာ Burma လို ့ပြောမှ သိတဲ့လူတွေ ပိုများပါတယ်ရှင်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင် အမည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အဂ်လိပ်လို Myanmar ဒါမှမဟုတ် Burma လို ့သုံးတာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး သင့်တော်မယ်ဆိုတာကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဆက်လက် လှုပ်ရှားနိုင်ပါစေလို့ ကျမတို့ ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။
● ဒေါ်အောင်ဆနးစုကြည်အဖြေ ။ ။ NLD နဲ ့ကျမက မူအရ မြန်မာနိုင်ငံကို အဂ်လိပ်လို Burma လို ့ပဲ ပြောပါတယ်။ မူအရလို ့ဆိုရတာကတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ ့အမည်ကို ကမာ္ဘ ့အလယ်မှာ ပြောင်းပြီးခေါ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ… ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒကိုမရယူဘဲ လုပ်သင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နဝတက မိမိတို ့ဆန္ဒတခုတည်းနဲ ့သာ ပြောင်းပြီးခေါ်ခဲ့တဲ့ အဂ်လိပ်လို Myanmar ဆိုတာကို ကျမတို့ လက်မခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
mandalay gazette has written 19 post in this Website..
View all posts by mandalay1875 →
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်လိုမှ မေ့ဖျောက်လို့ မရတဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတခုပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မျက်မှောက် အခြေအနေမှာ စစ်တပ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လက်မခံရင် သဘာဝမကျသလို ၁၉၉ဝရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်းဟာလည်း ပြသနာပြေလည်ဖို့ လက်တွေ့မဆန်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ညောင်နှစ်ပင်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁ဝရွေးဂေါက်ပွဲ တို့သည်သာ လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းချက်ဆိုသူ အတုအချောင်များ၊ တတိယဥစုပ်ဝင်များ၊ စစ်ဝါးတီးများ သိထားဖို့ပါ။
ပြဿနာပြေလည်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလဲ.. ပြောပြပါဦး…
ဘာကြောင့်ဆို.. စစ်တပ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို မကြိုက်ကြဘူးဆိုပြီး..
တစ်ကယ့် solution ကို မရှာကြဘဲ.. အဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲ ပါးစပ်သေနတ်ပစ်ခတ်နေကြတာကြောင့်ပါ..
ဒီနိုင်ငံသား.. တွေ အနေနဲ့.. ဘာလုပ်ကြမှာလဲ.. ဘာလုပ်ကြရမှာလဲ..
ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာပါ..
တကယ်တမ်းတော့ BURMA လို. ခေါ်တာ အဓိပ္ပာယ်အရ မှားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေက အရင်က မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသေချာမသိတာမို. BURMA လို. ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ BURMA လို.ခေါ်တယ်ဆိုရင် မြန်မာလို “ဗမာနိုင်ငံ” လို. အဓိပ္ပာယ် ရောက်သွား လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဗမာတွေဘဲရှိတဲ့ ဗမာပိုင်တဲ့ နိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင်” မြန်မာ” လို. ခေါ် ရင် ပို မှန်လိမ့်မယ်။
Dear King of Secrets,
Do you know when the word ” Myanmar” was started to use in our country. And do you believe that by saying ” Burma” we are implying that this country belongs only to Burmese? I hardly found any written documents in the past that mentioned (Myanmar) in the literature that written about our country in English but the ones I found is in burmese alphabets in which both bamar and myanmar were frequently mentioned. The overall opinion of entire people of this country is the most important how this country should be addressed.